ပရိသတ်တွေမမြင်ဖူးသေးတဲ့ ကျော်ကျော်ရဲ့ကလေးဘဝကပုံရိပ်လေးတစ်ပုံကို ဆေးထိုးလိုက်တဲ့ညီထွဋ်ခေါင် နဲ့ဆုမြတ်နိုးဦး - Cele Platform
ခန့်ညားတည်ငြိမ်လွန်းတဲ့ပုံစံလေးကြောင့် နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေကြွေနေရတာကတော့ သရုပ်ဆောင် ကျော်ကျော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားခေတ်မှ ယနေ့ချိန်ထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။ လတ်တလောမှာတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတာပါ။
ဒါ့အပြင် သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးနဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်တို့နဲ့အတူ ပရိသတ်တွေကို ဘဝအမောတွေပြေစေရန်အတွက် N-H-K =ဗရမ်းဗတာ ဘီအက်ဖ်အက်ဖ်များဆိုတဲ့ Page လေးတည်ထောင်ကာ ပရိသတ်တွေကို အခွီဗီဒီယိုများ တင်ပေးနေတာပါ။ ဒီ page ကနေမှတစ်ဆင့်လည်း သူတို့ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဝေမျှလေ့ရှိတာပါ။
အခုတစ်ခေါက်မှာလည်း ကျော်ကျော်ရဲ့ကလေးဘဝက ပုံရိပ်လေးကို သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က Page တွင်တင်ကာ ဆေးထိုးလိုက်ပြန်ပါပြီနော်။
သူတို့ရဲ့ Facebppk Page တွင်လည်း ” ဘယျသူလဲသိကွလား ? ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပါ။ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီပုံရိပ်လေးကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။Photo Credit – N-H-K =ဗရမ်းဗတာ ဘီအက်ဖ်အက်ဖ်များ Facebook Page
ခနျ့ညားတညျငွိမျလှနျးတဲ့ပုံစံလေးကွောငျ့ နှုတျခမျးနီမလေးတှကွှေနေရေတာကတော့ သရုပျဆောငျ ကြျောကြျောပဲ ဖွဈပါတယျ။
သူဟာ ဗီဒီယိုဇာတျကားခတျေမှ ယနခြေိ့နျထိအောငျမွငျမှုတှရေရှိထားသူတဈယောကျပါ။ လတျတလောမှာတော့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို ဆကျတိုကျလုပျဆောငျနတောပါ။
အခုတဈခေါကျမှာလညျး ကြျောကြျောရဲ့ကလေးဘဝက ပုံရိပျလေးကို သူငယျခငျြးနှဈယောကျက Page တှငျတငျကာ ဆေးထိုးလိုကျပွနျပါပွီနျော။
သူတို့ရဲ့ Facebppk Page တှငျလညျး ” ဘယသြူလဲသိကှလား ? ” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာပါ။ ပရိသတျတှအေတှကျ ဒီပုံရိပျလေးကို တဈဆငျ့ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။Photo Credit – N-H-K =ဗရမျးဗတာ ဘီအကျဖျအကျဖျမြား Facebook Page